Daawo: Xildhibaan Tima-cade oo ka mid ah mudanayaasha golaha deeganka Hargeysa ee xisbiga Waddani. Xiladibaan Tima-Cade waxa ka war bixiyay hadley xadhig ay dhawaan xukuumadu Somaliland u geysatey. | Somaliland Voice
Daawo: Xildhibaan Tima-cade oo ka mid ah mudanayaasha golaha deeganka Hargeysa ee xisbiga Waddani. Xiladibaan Tima-Cade waxa ka war bixiyay hadley xadhig ay dhawaan xukuumadu Somaliland u geysatey.
24th November 2017 By Somaliland Voice
Xildhibaan Tima-cade oo ka mid ah mudanayaasha golaha deeganka Hargeysa ee xisbiga Waddani. Xiladibaan Tima-Cade waxa ka war bixiyay hadley xadhig ay dhawaan xukuumadu Somaliland u geysatey.